Thola amadolobha ama-5 amahle kakhulu eFrance | Bezzia
USusana Garcia | 07/04/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
IFrance izwe eligcwele amakhona abukekayo. Amadolobha ayo anesitayela futhi siyayithanda iParis noma iBordeaux, kodwa ngaphezu kwayo kungenzeka thola amadolobhana amaFrance amangalisayo azothatha umoya wakho. Kwesinye isikhathi kufanele ubalekele emadolobheni ukuze uthole izindawo ezimangalisa kakhulu ezinobuntu obuningi.
En France kunamadolobha amaningi amahle, kodwa namhlanje sizokhuluma ngezinhlanu zazo. Uma uthanda lezi zinhlobo zokuvakasha, zinake zonke ngoba ngakunye kunento ethokozisayo engayinikeza. Ngakho-ke jabulela amaphuzu amasha wokuvakasha okufanele uwashaye eFrance.
Leli dolobha lisemnyangweni weLot futhi linokuvakashelwa okuningi, ngemuva kweMont Saint-Michel. Kule ndawo kwasekuvele kukhona umuntu ePaleolithic Ephezulu, ngoba ineCueva de las Maravillas, umhume onemidwebo yangaphambi komlando. Yidolobha elikwazile ukuphambukisa iCamino de Santiago nokuthi namuhla liheha kakhulu. Okunye ukuhambela okuyinhloko kule ndawo yisigodlo, lapho ungabona khona amawa nemibono yalo lonke idolobha. Ukwehla ukubona idolobha ongakwenza hamba ngeCamino de la Cruz noma nge-funicular engaphansi komhlaba. Ikhulu le-XNUMX leminyaka iPuerta de San Marcial lingena endaweni yezindawo ezingcwele kanye nesikwele esihle sendawo engcwele. Futhi akufanele uphuthelwe isonto laseSan Amador kusukela ngekhulu le-XNUMX.
Le ndawo, ebivele inabantu ngekhulu le-XNUMX BC, inikela ngenqaba enhle engashiyi muntu engenandaba. Le nqaba yesikhathi esidala eseningizimu-mpumalanga isinikeza ukuheha okukhulu. Kungcono ukuyivakashela ngenkathi ephansi ukuze ungazivezi kwezokuvakasha okweqile. I- Inqaba inamakhilomitha angaphezu kwamathathu ezindonga enendawo ebiyelwe ngaphandle nengaphakathi futhi phakathi kwayo kukhona ama-lizas, indawo eyisicaba ezungeze inqaba. Enqabeni kunemibhoshongo eminingi, amasango afana neNarbonne Gate, okuvamise ukuba yisango lokungena, ngisho nenqaba. Kufanele futhi sibone iBasilica yaseSaint-Nazaire, enezici ezithile zamaRomania kepha ukubukeka okucishe kube yiGothic ngokuphelele.
Leli dolobha lisendaweni eseCamino de Santiago eningizimu yeFrance. E-Conques kufanele ujabulele ukuhamba okuhle emigwaqweni yayo, ubona ukwakheka kwezindlu zayo, ezinamafreyimu enkuni nophahla ophahleni. Isikhumbuzo esikhulu sedolobha yi- Isitayela se-Romanesque Abbey of Conques lapho iPortico yeSahlulelo Sokugcina ibonakala khona. Kuyo ungabona futhi ne-Treasury Museum enezinto ezisetshenziswayo. Okungafanele kuphuthelwe yizindawo okusebenza kuzo izingcweti nezitolo ezincane ezisendaweni.
Yilokho kubhekwe njengedolobha elihle kunawo wonke e-Alsace. Inokuhlelwa okuyindilinga okwehlukile ngezinhloso zokuthengisa. Cishe ngamakhilomitha amahlanu ukusuka lapho kunombono wokubonga lobu bumba bedolobha. Kufanele uvakashele iRue du Rempant ngoba ngumgwaqo lapho singabona khona okushiwo ukwakhiwa kwedolobha. Nansi futhi indawo ethwetshulwe kakhulu edolobheni, indlu yaseLe Pigeonnier esekhoneni futhi ehlukanisa imigwaqo emibili. Kumele futhi sibone iPeace du Chateau, isikwele esibaluleke kunazo zonke esigodini esineFontana de Saint Leon emaphakathi.
Lokhu kungenye yamadolobha amahle ongafanele uwaphuthe. Uma ufaka ngokusebenzisa URue Grande uthola i-Place de la Grande Fontaine okwakuyisikwele esidala semakethe. Ngemuva kwayo kukhona iSonto Square, neBandla lokuguqulwa kukaSanta Paul. Endaweni eseningizimu kunombono obekwe phezu kwamathuna, indawo enikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwedolobha lonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Amadolobha ama-5 eFrance lapho ungathanda ukuhlala khona